मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै वाग्मतीका मुख्यमन्त्री, ८ मन्त्रालय फुटाएर १४- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
मकवानपुर — वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले जम्बो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि उनले मन्त्रालयसमेत विभाजन गरेका छन् ।
प्रदेशमा हाल कायम रहेको ८ मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रालयको संख्या १४ वटा बनाउन लागिएको हो । मंसिर १५ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयानुसार मन्त्रालय थप गरी राजपत्रमा सूचनासमेत प्रकाशन गरिएको छ ।
हालको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइने भएको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।
भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर खानेपानी, उर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय बनाइएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई गठबन्धन भित्रका दलहरूलाई भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय थप गरिएको हो ।
प्रकाशित : मंसिर १८, २०७८ ११:३१
सबै देशले ओमिक्रोन भेरियन्ट फैलिन नदिन निगरानी बढाउनुपर्छ : डा. पूनम खेत्रपाल
काठमाडौँ — विश्व स्वास्थ्य संगठनकी दक्षिणपूर्वी एसियाका क्षेत्रीय निर्देशक डा. पूनम खेत्रपाल सिंहले सबै देशहरुले छिटोभन्दा छिटो ओमिक्रोन भेरिएन्टको निगरानी बढाउन, सतर्क रहन र कुनै पनि आयातलाई तीव्र रुपमा पत्ता लगाउन आग्रह गरेकी छिन् ।
उनले भाइरसको थप फैलावटलाई रोक्न कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएकी छिन् ।
दक्षिणपूर्वी एसियामा कोरोना पुष्टिको विषयमा सम्बोधन गर्दै उनले सबै देशले व्यापक र अनुकूल जनस्वास्थ्यका उपायहरुको कडा पालना गरिनु आवश्यक रहेको बताइन् ।
‘ओमिक्रोन भेरिएन्टमा धेरै संख्यामा उत्परिवर्तनहरु छन्, जसमध्ये केही चिन्ताजनक छन् । विश्वभरका अनुसन्धानकर्ताहरुले ओमिक्रोनको सर्नसक्ने गुण, गम्भीरता र प्रतिरक्षा क्षमताबारे राम्रोसँग बुझ्नको लागि अध्ययन भइरहेका छन् । डब्लुएचओ नयाँ भेरिएन्ट अफ कन्सर्नको केसहरु पत्ता लगाउन र रिपोर्ट गर्न सक्षम देशहरुको प्रशंसा गर्दछ ,’उनले सम्बोधनमा भनेकी छिन् ।